Kubatana kunogadzirira nyowani C # compiler inonzi Burst | Linux Vakapindwa muropa
Kubatana kunogadzirira komputa nyowani muC # inonzi Burst
Kubatana inguva yakakurumbira mutambo injinikunyanya kune ayo akazara uye ari nyore-kushandisa-ekugadzirisa maturusi.
Zvisinei, injini inofanira kutevera kushanduka kwemashini: kwemakore gumi, mapurosesa haawedzere muhuwandu, asi muhuwandu hwema cores. Mune mamwe mazwi, Kuti ushandise mashandiro matsva aripo, mitambo inofanira kumhanyisa kodhi yavo pama cores akasiyana, kuburikidza neshinda dzakasiyana.
Nekudaro, kubva panguva iyo tekinoroji inowanikwa, mishoma mitambo iri kunyatso kubudirira. Muchokwadi, matambudziko mukunyora kodhi yakadaro akawandisa.
Kuti udzivise izvi zvakaipa, zvinokwanisika kutevedzera mamwe seti emitemo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero chekuti Kubatana kuri kushanda pane nyowani nyowani muC #, inonzi Burst nazvo, kana mitemo iyi ikasatevedzwa, kukanganisa kwekuunganidza kunoitika.
Kuti uwane izvi, kodhi yacho inofanirwa kunyorwa seunganidzwa wemabasa anofanira kuitwa. Rimwe nerimwe remabasa aya inoita shanduko pane iyo data.
Iyo programmer inofanirwa kudoma nzvimbo dzekurangarira dzaanogona kuwana kuverenga-chete uye idzo dzaanoda kuverenga nekunyora dhata- Iyo compiler ichaita shuwa kuti haushandise chero chinhu kunze kwezvi ziviso.
Mutevedzeri anobva asarudza nzira yakanakisa yekuzadzisa aya mabasa, munguva chaiyo, neruzivo rwekuwedzera: unogona kuona kuti hapana basa rinonyora dhata uko mumwe munhu ari kuyedza kuverenga kana kunyora, semuenzaniso.
Burst haina kuitirwa chete kuti ifambise yakafanana programming: inoshandiswa zvakare mumativi akaomesesa (kubva pakuona kwekuita) yeiyo Unity kodhi.
Kusvika parizvino izvi zvakanyorwa muC ++, asi ma compiler azvino haagutsi zvachose.
Zvechokwadi, kana mugadziri achida kuti chiuno chiitwe vekitori, ivo havana vimbiso yekuti muunganidzi acha, nekuda kwekuwedzeredzwa pakati pevaviri maekitori, semuenzaniso, muunganidzi anofanirwa kuratidza kuti, mune zvese zvinogoneka uye zvingafungidzirwe zviitiko, mairi mairi haawirirane nekero dzakafanana mundangariro).
Nei Burst uye kwete iripo compiler?
Kuita chinhu chakakomba poindi kana chiuno chisina kuvhenekwa idambudziko chairo rinoda kugadziriswa nekukurumidza.
Uyewo, yakagadzirwa binary inofanirwa kuve yakachengeteka kupihwa buffer yekufashukira zvikanganiso uye mareferenzi ane njodzi anofanirwa kuwanikwa nekukurumidza sezvazvinogona, aine chaiwo mameseji ekukanganisa pane asina kujekeswa maitiro (izvo zvinokonzeresa matambudziko mazhinji ekuchengetedza).
Tatarisana nezvinodiwa izvi, iwe uchiri kuda kusarudza mutauro wekuisa uyu compiler- Musiyano kana subset yeC, C ++, C # kana mutauro mutsva?
Mutauro mutsva haisi sarudzo yakanaka nekuti pakutanga unodzivirira kuve nekudzidzisa vanhu neichi chishandiso chitsva.
C # ine sarudzo kubva kune vanoona maonero, Sezvo yatove kushandiswa neinjini yemutambo ichave yakanyorwa mumutauro mumwechete nemitambo.
Uyewo, C # yatove neyakakura kwazvo ecosystem, pane kudaro, C ++ ichiri kutambura nenhaka yayo kubva kuC.
Sarudzo iyi yakaitwa kuti ienderere mberi neC #, asi nekubvisa zvinhu zvinoverengeka zvinokanganisa mashandiro, senge raibhurari yakajairwa, kazhinji kuunganidzwa kwemarara, uye mvumo.
Burst hainyatsoshanda seyakazara compiler sezvo isingatore huwandu hwakawanda hwekodhi seyokuisa, asi chete iyo yekupinda poindi kune yakakosha chiuno.
Izvo zvinongozvisanganisa sebasa, pamwe nezvose zvarinodaidzira. Iyo nhanho yekugadzirisa yakanyanyisa kukwirira: sezvo Burst inotarisa pane zvimwe zvikamu zvekodhi, zvinogona kutora nguva.
Iyo yekutanga iteration yeBurst, ine HPC # uye iyo system system yakauya neUniity 2018.1.
Iyo inogadzirwa kodhi dzimwe nguva inokurumidza kupfuura iyo yapfuura vhezheni muC ++, dzimwe nguva inononoka, asi vanogadzira vanovimba kuti ivo vanogara vachizadzisa kanokwana iwo mwero wakaenzana wekuita seC ++.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kubatana kunogadzirira komputa nyowani muC # inonzi Burst
KDE Plasma 5.15.2 ikozvino yawanikwa ne 23 gadziriso, gadziridza izvozvi
DMA: hutsva hwekuchengetedzeka hwakawanikwa